Sidee looga saaraa codka mugdiga ah ee shaashadaha ku yaal MIUI ee Xiaomi iyo Redmi | Androidsis
Markii la bilaabay MIUI 12 oo la fuliyay waqti dheer ka hor, dadka isticmaala qaarkood waxay ka cawdeen in shaashadaha ay sida caadiga ah ku qaataan shaqada MIUI ay yihiin kuwo mugdi ku jiro, wax aan ahayn MIUI 11 iyo noocyo kale oo ka horreeyay. .
Tani waa wax lagu xallin karo dhowr tallaabo oo fudud, si shaashadaha muuqaalku u muuqdaan kuwo caadi ah oo aan daciifin. Tani waa waxa aan ku sharaxeyno casharkaan cusub ee wax ku oolka ah.
Ka takhalus dhawaaqa madow ee shaashadaha ku yaal MIUI ee Xiaomi iyo Redmi
Si loo baabi'iyo codka mugdiga ah ee shaashadda MIUI ee Xiaomi iyo Redmi maahan inaad wax weyn qabato, runtii. Kaliya tag qaabeynta, wax aad sameyn karto kaliya adigoo gujinaya astaanta udhaxeysa ama adoo hoos u dhigaya ogeysiiska oo aad riixeyso batoonka qalabka.
Markaan ku jirno goobaha Xiaomi ama Redmi casriga ah oo leh MIUI 12, waa inaan gujino qaybta Screen ka dibna u tag Habka mugdiga ah. Halkaas waxaan ka eegnaa hoosta xulashada Toos ugu hagaaji farqiga, taas oo aan ku khasban nahay in aan joojino. Marka tan la sameeyo, shaashadaha ayaa loo soo saari doonaa si caadi ah.
Dhibaatada waxaa sabab u ah qaabka mugdiga ah, kaas oo awood u siinaya ikhtiyaarkan si otomaatig ah markii la awoodo.
Waxaan sidoo kale leenahay casharro kale oo aad eegi karto. Wax yar uun baan idinkaga tagnay hoos:
Sida looga saaro barta hoose ee hagista Xiaomi ama Redmi
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Xiaomi » Sidee looga saaraa codka mugdiga ah ee shaashadaha ee MIUI ee Xiaomi iyo Redmi
Alexa wuxuu sameyn doonaa wicitaano kooxeed iyo wicitaano fiidiyoow: Sidan ayaad u abuuri kartaa iyaga